Endrika Roa amin’ny Zavamisy Iray: Vaninandro Mafana Tao Amin’ny Nosy Chios (Gresy) · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Oktobra 2015 5:26 GMT
Vakio amin'ny teny English, русский, Français, Nederlands, Español, عربي, 繁體中文, 简体中文, Ελληνικά
Fianakaviana mpitsoa-ponenana mipetraka amin'ny tany ao amin'ny Seranan-tsambon'i Piraeus, mijery ranomasina, miandry fiara fitaterana hitondra azy ireo any amin'ny garan'ny metro. Sary avy amin'iMichael Debets Copyright Demotix (28/9/2015).
Nosoratan'i Artemis Touli
Henjana ny andro mafana tamin'ity fahavaratra ity, ary azafady, aza atomboka amin'ny mahazatra hoe “Aiza kosa fa mbola Septambra izao ….” Efa tapitra ny andro mafana, efa mihitsan-dravina izao. Nitondra lesona ity fotoan'andro mafana lasa ity izay hitohy mandritra ny mihintsan-dravina sy ny ririnina ary ny aorian'izany raha mitohy ny fahantrana anatiny sy ivelan'ny firenenay.
Ao anatin'ny tontolon'ny krizy, ny fampifantohana, ny fahoriana sy ny lolom-po ao Gresy, nanana vanim-potoanan'ny mpizaha tany izahay teto Chios izay tsy tao anatin'ny krizy mihitsy, ary afaka manamarina izany amin'ny maha-vavolombelona nanatri-maso aho.
Ary tonga avy eo ireo mpitsoa-ponenana marobe. Na “mpifindra monina tsy ara-dalàna”? Mpifindra monina? Antsoiko fotsiny izy ireo hoe “olona enjehina” olona mitady fanantenana. Ary manampy ny filàn'ny olona ao an-toerana hiavotan-tena ny an'ireo vahiny. Ary lasa iray izy ireo avy eo.
Isan'andro ao amin'ny Seranan-tsambon'i Chios, miverimberina ny sary iray: mitondra ireo olona voaangony mandritra ny alina sy vao maraimbe any amorontsiraka ireo mpanao fisafoana ao amorondranomasina. Tahaka izany ihany koa no ataon'ireo sambo kely avy any Psara sy Egnousa, nosy kely roa akaikin'i Chios. Mandritra ny vanintaona mafana, amin'ny atoandro sy hariva isaky ny moron-dranomasina manerana ny morontsiraka Tiorka ny fampidinana olona. Indraindray, misy fiara fitaterana tonga manangona ny olona ary mamindra azy ireo any amin'ny manampahefanan'ny seranan-tsambo, izay misy ny Vokovoko Mena miasa manome fitsaboana vonjimaika na fanampiana ara-pitsaboana hafa.
Isa-maraina, lasa fanamainan-damba goavana ny seranan-tsambo izay feno fitafiana, kiraro sy zavatra manokana ary maina amin'ny filentehan'ny masoandro, aorona ao anaty kitapo ary lasa indray amin'ny dia hafa ho any amin'ny fanantenana. Isan'andro, mifandimby miandry ny morontsiraka ireo olona ireo, mandray ireo olona rendrika an-tsambo, manoratra ny anaran'izy ireo, manome azy ireo ny antonta-taratasy ilaina ary mamela azy ireo indray hanohy ny diany ho any amin'ny fanantenana. Isan'andro. Isa-maraina. Ao amin'ny seranan-tsambo. Manampahefanan'ny Seranan-tsambo, mpiasan'ny Vokovoko Mena, mpilatsaka an-tsitrapo, mpamonjy voina. Olo-tsotra isan'andro mankany amin'ny Zaraidainam-bahoaka Chios ary manome izay azony omena.
Mazava ho azy, mety misy ny tsy fahatomombanana, ny fitondratena ratsy sy ny loza. Olona manjavona ao anaty vahoaka, fifandirana miseho, voasazy noho ny zavatra tsy nataony ny tsy manan-tsiny. Nefa tsy tokony ho adinointsika, fa na inona na inona antony, misy olona miasa foana mandritra ny 24 ora isan'andro, isan'andro, izay mamonjy ny hafa. Hitantsika isan'andro izy ireo. Isa-maraina. Tsy tokony hisy na inona na inona hanakana ny asan'izy ireo.
Indray andro aho, nihaona tamin'ny mpivady Syriana mitady birao fifanakalozam-bola. Alahady ny andro tamin'izay. Nanontany azy izy ireo hoe inona ilay firenena, sy ny volany – nihevitra izy ireo fa niantsona tao Italia. Fanampin'izany, satria mpitsoa-ponenana marobe no tonga amin'ny alina ao amorontsirak'i Tiorka, lazaina izy ireo mandritra ny fiampitàny ny sisintany fa mamakivaky renirano lehibe fotsiny izy ireo. Iray amin'ireo fotoana mampihetsi-po indrindra niainako ny mpitsoa-ponenana iray nanontany ahy raha misy moske ao amin'ny nosy, satria te-hivavaka izy. Tsy dia nahazo aina aho satria ny hany azoko lazaina aminy dia: “Eny, misy iray, saingy tsy afaka mankany ianao satria mbola eo ‘andalam-panorenana’ hatrany ilay izy.” Maro ny sary sy ny zavatra niainana ary hitoetra mandrakizay ho fahatsiarovana, satria vanim-potoana hafa izany, vanin-taona mafana hafa tsy toy ny mahazatra, ary nanova ny hevitra sy ny fomba fijerinay rehetra.
Lasa ny fahavaratra. Ary nianatra ny ho olombelona isika, nianatra mandamina ny zavatra ilaintsika isika; nianatra isika fa misy hatrany ny toe-javatra tena ratsy kokoa noho ny antsika, ary tsy misy zavatra tokony heverina ho tsy votsotra eo amintsika intsony eo amin'ny fiainana. Nianatra isika fa raha manana ambim-bava, dia tokony hanome ho an'ny mpifanolobodirindrina amintsika, na iza na iza, fa tsy manary izany. Nianatra ny tsy hanary na inona na inona isika ary mampiasa ny zava-drehetra indray. Efa hitantsika ny endrika roa tamin'ny zava-misy marina.
Navoaka voalohany tao amin'ny vavahadim-baovao StasiNews ity lahatsoratra ity.